Soraty... Izao no lazaovy amin'Antananarivo | Hevitra MPANOHARIANA |
Soraty... Izao no lazaovy amin'Antananarivo
2017-10-08 @ 21:14 in Toekarena
Tonga amin'ny fotoana lazain'ny olona ho Apokalipsa ny zavamisy eto (ao) Antananarivo. Loza no dikan'ny Pesta na niavian'ny teny hoe pesta, hoy ny mpandalina ny teny. Dia tery ny tena hanoratra, toy ny fanoratr'ilay nanoratra ny Apokalipsa hita ao amin'ny baiboly: "Soraty... Izao no lazaovy amin'Antananarivo". Saingy tsy hoe nifandray amin'Andriamanitra aho na nodidian'Andrimanitra hanoratra nefa toy ny misy manery izany. Tsy mety mahavita tsara ny zavatra tokony atao raha tsy vita izay tokony hosoratana, toy ny hoe ozona tsy afa-manao na inona na inona raha tsy vita izay tokony hosoratana. Izay ve ilay aingam-panahy?
Inona ilay hosoratana? Ny loton'Antananarivo, ny korontan'Antananarivo, ny gaborarak'Antananarivo. Tonga ny fotoana tsy maintsy ilazana fa raha te-hivoatra na te-handroso kokoa i Antananarivo dia tsy maintsy maka izao fanapahan-kevitra mety efa fantatrareo mpamaky izao: Miala eto Antananarivo ny tsena ankalamanjana, na anaty fefy na ivelan'ny fefy, ary miala hatrany amin'ny 20km any mihitsy. Efa voretra loatra ny mponina ka isaky ny alamina dia miverina amin'ny gaboraraka hatrany rehefa avy eo satria heveriny fa izay no "voajanahary" aminy.
Faramparan'ny volana septambra, andro talata, nalamin'ny polisy kaominaly tsy maintsy ho tafiditra anaty fefy avokoa ireo mpivarotra anaty arabe eo Andravoahangy... dia nanaiky ny halamina ry zareo, nifaneritrery tao anaty tsena tao, hay ve manana toerana ao ry zareo fa tsy tiany fotsiny izao satria maneritery ny fiainany sy heveriny ho tsy hahazoany mpividy? Andro tsena anefa ny alarobia ka dia rava avy hatrany ilay fandaminana nezahina ny omalin'iny. Natao inona fotsiny ilay fandaminana teo raha rava avy hatrany izany ny alarobia? Dia tsy nety intsony ny tohiny fa asabe ho an'izay tokony hanao ilay izy indray. Manao ahoana indray ilay ao an-tsena? Ilay arabe mankao amin'ny toby fitiliana aretina araka ny filazan'olona azy dia mirefy 4metatra ny sakany raha kely indrindra fa bahanan'ny mpivarotra tanteraka ny fidirana mankao ka lalan'olona iray zara raha antonona olona iray no tsy maintsy ifanosehan'izay te-hiditra avy eo. Azo atao tsara ny mampisy lalana fidirana roa na telo fa tena sakanan'ny mpivarotra tanteraka izany fa ilay lalana iray iny ihany no tsy maintsy izorana. Dia mihodikodina ao ianao.
Fa ao anatin'io tsena io koa feno kizo. Mandeha mahitsy ianao fa rehefa tonga any amin'ny farany dia tsy misy lalana intsony, tampina tampoka ny lalana. Raha misy zavatra nojerenao teo ka mihevitra ny hiverina eo ianao afaka kelikely dia tsy hitanao tampoka ny lalana mankeo amin'ilay saika iverenana. Tsy diso lalana anefa ianao fa nisy mpivarotra iray na roa nanisaka ny toeram-pivarotany antenantenany teo, lasa ry zareo tampoka no faran'ny lalana raha tokony amin'ny sisin'ny lalana no misy an-dry zareo izoran'ny olona eo afovoany. Be ihany koa ny lalana zara raha antonona olona iray fa tsy azo ifanenana, nefa ao ambadiky ny mpivarotra malalaka be azo ametrahana kamiao (tsy milaza mihitsy aho hoe misy mametraka kamiao ao). Izany hoe manao izay tiany ny mpivarotra ary manao izay metimety aminy na ho fanampenana ny lalana aza izany.
Rehefa tonga indray ny folakandro, indreny ny sarety maro mitatitra entana miala an'Andravoahangy ary mizotra ho any Behoririka sy Analakely, hamonjy tsimoramora ny tsenan'i Mahamasina izay hotontosaina ny alakamisy. Tsy izay rehetra nivarotra tao Andravoahangy no hihazakazaka ho any Mahamasina fa tsy vitsy ihany koa ry zareo na izany aza. Matiantoka ny fifamoivoizana fa tsy maintsy manaraka ny dian'ny sarety enti-tanana. Lazaina izany hilazana fa singa iray anisan'ny miteraka fitohanana indrindra eto Antananarivo ny fisian'ny tsena. Raha foanana any io tsena io, foanana fa tsy hoe afindra toerana, dia tsy misy loatra intsony ny ilàna ny sarety sy ny posy. Asabotsy izany moa dia tsy azon'ny fiara misy maotera idirana intsony ny izany Isotry izany. Fa na môtô aza ianao dia sahiranao raha mitetateta ny hitsofoka satria hoe arabe.
Asa raha efa hitanareo ilay lalana mankany amin'ny "Charlemagne" taloha iny fa mandeha ambonin'ny entambarotra ny sarety sy ny fiara, izany hoe sabakain'ny fiara ao anelanelany ao ny anana sy ny legioma amidy amin'ny tokony ladina an-tany. Dia mba mandingadingana ireo hanina amidy ireo ihany koa ny mpandeha an-tongotra. Izany ve no vahaolana amin'ny sady anaovana tsena ny arabe no handehanan'ny fiaran'ny olona mipetraka eo amin'ny manodidina ihany koa? Tsy maka lagy tokoa angamba isika nefa na izany aza dia tafahoatra... tsy maintsy apetraka ny fitsipika... ary tsy omena fakampanahy intsony ny olona hoe androany ihany io no milamindamina anaty fefy fa ny hariva ihany aza dia miparitaka manerana ny arabe indray. Sisa fanafodin'izany? Foanana tanteraka ny tsena ankalamanjana na anaty fefy iafiana tsindraindray rehefa te-handamina iny ny tompon'andraikitra na ivelan'ny fefy ivoahana rehefa reraka ny mandamina ny tompon'andraikitra.
Fepetra tsy maintsy raisina ihany koa ny fandrarana ireo fiara rehetra tarihim-biby na tarihin'olona, ary raràna ihany koa ny fidiran'ny kamiao be velarana na andro na alina fa tsy maintsy afindra amin'ny fiara antonontonony ny entana raha tiana ampidirina eto (ao) Antananarivo. Farany, tsy hoe tolo-kevitra ireo fa tsy maintsy atao raha tiana hivoatra ny tanàna, saingy efa safidintsika mihitsy ny ho gaboraraka satria izay no heverintsika ahafahana mivelona. Omeo tolokevitra hafa mahomby kokoa aho raha heverinao fa tsy mety mihitsy izany fanesorana ny tsena izany. Ho avy indray moa ny faran'ny taona dia hangatahana indray ny fepetra manokana ivarotana isan'andro amin'ny arabe? Eritrereto ihany fa ny Shinoa no mahazo tombontsoa voalohany amin'izany...